Filtrer les éléments par date : mercredi, 15 août 2018
mercredi, 15 août 2018 21:58
Fanadinana CEPE: Tsy tontosa indray ny tao Anjagnoveratra - Sambava
Nanao be midina teny an-toerana ny solontenan'ny Ministeran'ny fampianarana notarihin'ny mpanolotsain'ny Minisitra, Ralison Julien nanao fanadihadiana ny antony tsy nampandeha ny fanadinana teto amin'ny foibem-panadinana Anjagnoveratra mandraka androany.
Nifanipy baolina teo ny avy amin'ny Kaominina sy ny mpanambe fa fiombonan-kevitra avy tamin'ny mpampianatra sy ny Ray aman-dreny hoy ny nandray fitenena mazava sy mahitsy.
Nisy ny dinika sy fifandresen-dahatra ka nifanaraka fa hatao amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra ny fanadinana CEPE rehefa tsy raikitra androany.
Ahitana ankizy miisa 768 voasoratra anarana ny foibem-panadinana Anjagnoveratra.
mercredi, 15 août 2018 21:55
Sambava: CEPE tao anatin'ny fanahiana
Ny teto Sambava renivohitra no azo lazaina nandeha tsy nisy tomika ny fanadinana CEPE omaly, izay nahitana mpiadina 2.946 voasoratra anarana, saingy nisy 320 no tsy niatrika ny fanadinana.
Tsy nandray anjara ireo mpampianatra avy amin’ny Sempama Nosy ka niteraka fikorontanana tamin'ny foibem-panadinana maro.
Ny tao amin’ny foibem-panadinana Bemanevika izao dia tamin’ny sivy ora vao afaka nanomboka. Tsy ampy isa indray anefa ny laza adina ka voatery nitadiavana vahaolana, nandeha nitady toerana nanaovana photocopie.
mercredi, 15 août 2018 21:40
mercredi, 15 août 2018 21:27
Antsohihy: Nizotra ampilaminana ny CEPE
Niisa 4250 ireo mpiadina voasoratra anarana tato amin'ny fari-piadidiam-pampianarana Antsohihy, nitsinjara tamin'ny foibem-panadinana 17, ka ny roa (02) tamin'ireo dia teto Antsohihy tampon-tanana izay nahitana mpiadina voasoratra anarana niisa 1315, nitsinjara tamin'ny CEG Haute Ville EPP Ambalabe. Nahatratra 110 ireo mpiadina tsy tonga niatrika fanadinana ny andron'ny 14 aogositra.
Tetsy ankilany dia nanatanteraka fitsangatsanganana ireo mpampianatra Sempama Nosy, nanao fitokonana ny andron'ny fanadinana CEPE mba tsy hiampangana azy ireo ho manelingelina ny fanadinana.
mercredi, 15 août 2018 21:25
Fifidianana filoham-pirenena: Niampy roa ireo kandida nametraka dosie
Tonga nametraka dosie firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena teny amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny praiminisitry ny tetezamita Beriziky Jean Omer (Antsika Madagasikara) sy Richard Razafy Rakotofiringa (Solidarité des Jeunes Intellectuels pour l’Avenir de Madagascar (SJIAM)).
mercredi, 15 août 2018 20:58
Andohalo by night
(Voir Galerie et Album Photo)